RTV Record Anosizato May ny ampahan'ny fitaovana
May ny ampahan’ny haino aman-jery RTV RECORD etsy Anosizato Atsinanana. omaly maraina tokony ho tamin'ny 07h30 teo ho eo no nitrangan’izany.
Vokatry ny tsy fietezana teo amin'ny herinaratra no nahatonga izany raha araka ny vaovao azo ka nitarika ny fahamaizan'ny fitaovana vitsivitsy. Anisan’ny voakasika tamin’izany ny studio. Tonga teny an-toerana namono ny afo moa ny sampana mpamonjy voina. Natsahatra vetivety vokatr’izany moa ny radio sy televiziona Record saingy efa niverina tamin’ny laoniny kosa tamin’ny fotoana nanoratanay.